Amadolobhana njengamabhizinisi avula indlela eya emiphakathini yaseCaribbean
Ikhaya » Izindaba Zamuva » I-Caribbean » Amadolobhana njengamabhizinisi avula indlela eya emiphakathini yaseCaribbean
Ukuhamba Ngebhizinisi • I-Caribbean • Amasiko • Industry Hospitality Industry • Izindaba zaseJamaica • Izindaba • Abantu • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Ezihlukahlukene
IJamaica ibizwa ngeHOME OF COMMUNITY TOURISM yi-International Institute for Peace through Tourism (IIPT) njengoba kulapho yaphayona khona eminyakeni engama-45 edlule ngu-Diana McIntyre-Pike umnikazi / opharetha weThe Astra Country Inn Mandeville ngaleso sikhathi kanye noDesmond Henry ongasekho , uMqondisi Wezokuvakasha owedlule. Ngokubambisana bakha i-Countrystyle Community Tourism Network (CCTN) ukuthuthukisa ezokuvakasha komphakathi ikakhulu ogwini oluseningizimu yeJamaica.
I-Countrystyle Community Tourism Network ithole ukuhlonishwa kwasendaweni nakwamanye amazwe.
UDiana McIntyre-Pike uthole imiklomelo eminingana ngalolu hlelo.
Uhlelo lwamaVillage as Businesses (VAB) belusebenzisa uhlelo lwezinsuku ezinhlanu Lokuqeqeshwa Kwezokungenisa Emabhizinisini emiphakathini eminingi eJamaica kanye nasendaweni yaseCaribbean.
Eminyakeni yakamuva, i-CCTN yathuthukisa inhlangano yobulungu engenzi nzuzo ebizwa nge-VILLAGES AS BUSINESSES (VAB) ethole ukuqashelwa kwasendaweni nakwamanye amazwe. I-Countrystyle Community Tourism Network iyilungu le- Inethiwekhi Yezokuvakasha Yomhlaba (WTN), noDiana McIntyre-Pike bathole imiklomelo eminingana ngalolu hlelo, okwakamuva kakhulu kwaba ngo-2020 kwi-WTN esanda kumiswa njengomunye wabasebenzi abangu-17 bezokuvakasha abazoklonyeliswa ngomhlaba wonke Umklomelo Wamaqhawe Ezokuvakasha, uhlelo lwemiklomelo oluhlonishwayo.
Uhlelo lwamaVillage as Businesses (VAB) belusebenzisa uhlelo lwezinsuku ezinhlanu Lokuqeqeshwa Kwezokungenisa Emabhizinisini emiphakathini eminingi eJamaica nase isifunda seCaribbean manje eseqinisekiswe yi-University of the West Indies (UWI) Open Campus. Ukuqeqeshwa kuhlanganisa ukuthuthuka komuntu, ucwaningo lwezimpahla ezikhona nezikhona, ukuqwashisa ngezemvelo, ukuvakasha nokukhethwa komkhiqizo, ukuthuthukiswa kwebhizinisi, ukuphepha kanye nezinqubo ze-COVID. Enye yezinhlangano zeJamican Diaspora, iMaking Connections Work UK, ivume iVAB nokumaketha UKUHAMBA KOMPHAKATHI KOMNOTHO njengesambulela.
Umufi uDesmond Henry
I-Countrystyle Community Tourism Network (i-CCTN) isanda kuthatha isinqumo sokuba neJamaican neCaribbean Diaspora babe ngabalingani bayo bokutshala izimali nokukhangisa. Isungule isikhwama esikhethekile sokuvakasha komphakathi esibizwa nge-COMFUND ngeBhodi yesikhashana yeDiaspora. I-COMFUND manje isibhalisiwe e-USA futhi njengamanje iyaqedwa nesikhungo sezezimali ukwenza lula iminikelo kanye nokutshalwa kwezimali okungahle kube khona. Inzalo ku-COMFUND izosekela imalimboleko yenzalo ephansi futhi inikeze ngezimali zamaphrojekthi afanelekayo wokuthuthukisa umphakathi afakwa ngamalungu amaVillage njengamabhizinisi. Zonke Izikhathi Zokuhamba Zokuphila Komphakathi Zokuphila kanye Nezokuvakasha zizofaka umnikelo ku-COMFUND.
Ukubambisana kusanda kuphothulwa ngenkundla yesicelo senhlangano yaseCaribbean Diaspora ebizwa ngeTravelJamii ezokwethulwa ngoSepthemba 2021. ITravelJamii App izosiza iGlobal Community ukuthi ibhekane nakho konke okwenziwa yiCaribbean, ngokukhuthaza ezokuvakasha, ezokuvakasha komphakathi, imikhiqizo emikhulu, amabhizinisi endawo , ezikhangayo, imicimbi, cuisine, umlando, imvelo, izindaba nokuningi.
UDkt Samuel Lee Hancock, CM uthi:
Septemba 2, 2021 ku-20: 58
Sawubona usuka eWashington, DC Diana! Yikuphi ukubabazeka okumangazayo okwenziwa yiCaribbean nokwaziwa umhlaba wonke “Kwamadolobhana Akho Njengamabhizinisi” njengengxenye ye-Countrystyle Community Tourism Network (CCTN). Okwakho kungukunyakaza okunamandla eJamaica nakwamanye amazwe angama-34, izindawo, kanye nokuncika kweCaribbean. Yikuphi ukufinyelela okuhle kwamazwe omhlaba kanye nokusabalala kwepulatifomu yakho ehlukile neyenzelwe umphakathi.
Manje yisikhathi sokuxoxa ngesiphakamiso sethu se-International Yachting Fellowship of Rotarians (IYFR) seCaribbean kanye neLatin American Fleets esiphakamisa ukumbozwa kwalo lonke ichibi laseCaribbean kuThe EmeraldPlanet TV. Lokhu kuzokwenzelwa ukusakazwa nsukuzonke kuleli nangaphandle. Isitayela sakho somphakathi se-ecotourism kanye ne-agritourism empeleni kuletha ukuxhumana, ukuqonda, ezentengiselwano, ukunika amandla abesifazane kanye nomphakathi, kanye nokuthula kulo lonke iCaribbean nasemhlabeni jikelele.
Ukwabelana lapha ngohlelo lwakho lwethelevishini, imibukiso, ne-Podcast yezinhlangano zakho ezivelele…
(Uma i-URL ingaxhunywanga vele ukopishe futhi udlule kusiphequluli sakho sewebhu. Jabulela uhambo lwakho!)
Isihloko: "Imiphakathi Eguqula Ubuholi Abesifazane Ngemfundo Yezamabhizinisi kanye Nokulima Okusimeme Kwezemvelo"
I-EmeraldPlanet International Foundation © Uhlelo lwe-YouTube URL:
I-Show '1' Theme: “Ukuvula Indlela Eya Phambili Ekuvakasheni Komnotho Womphakathi kusuka eJamaica naseCaribbean” https://www.youtube.com/watch?v=hHfPMvROzuw
Khombisa ingqikithi ye-'2 ': “Ukuqeqeshwa Kwabaholi Besifazane Nokuqeqeshelwa Amabhizinisi Amabhizinisi Asezokuvakasha Asuselwa Emphakathini” https://www.youtube.com/watch?v=GmBh80ZLTXY
Khombisa i-'3 'Theme: "Abesifazane Baholele Ukutshala Amabhizinisi Emvelo Emiphakathini" https://www.youtube.com/watch?v=vXxYeYdh5bI
Khombisa Ingqikithi '4': “Ukuhlonipha Ubuchwepheshe Bomdabu Nendlela Yokuphila”
"Ubuholi Besifazane Ukuguqula Imiphakathi Ngemfundo Yezamabhizinisi kanye Nokulima Okusimeme Kwezolimo" I-Podcast: https://open.spotify.com/episode/3AV2XKvJiNzAzN4o6cBUf8?si=fyq35DBOThmwI7P1M0XFbg&nd=1
Abaningi bamfisela okuhle uDiana ngalokhu kusakazwa kwezindaba okumnandi nokunye okuningi okuzokwakhiwa ngokuzayo mayelana "namaVillage akho njengamabhizinisi" njengengxenye ye-Countrystyle Community Tourism Network (CCTN) njengoba sisonke senza i-EmeraldPlanet ©.